मनपर्ने श्रीमती फेमिना कंटेस्टेंटका लागि मतदान गर्नुहोस् - अन्य
अब तपाइँको मनपर्ने श्रीमती फेमिना कंटेस्टेंट को लागि भोट दिनुहोस्!
कपाल खस्न रोक्न के खानुपर्दछ
हामी श्रीमती फेमिना २०२१ खोज्नको लागि हामी एक चरण नजिक छौं, र तपाईको मनपर्दो प्रतिस्पर्धीलाई भोटमा राख्ने तपाईंको पालो आउँछ। यो विशेष अनलाइन प्रतिभा शिकार महिलाहरु जो यसलाई ठूलो बनाउने र आफ्नो लागि यो बनाउनको लागि जोशिश छन् पत्ता लगाउन थाल्यो, किनकि उनीहरु तिनीहरु हुन् जसले आफ्नो धूर्तता, कौशल र प्रतिभा प्रयोग गरेर सबैका लागि जीवन सजिलो बनाएका छन्।
जब हामीसँग न्यायाधीशहरूको हाम्रो सम्मानित प्यानल छ, तपाईंसँग पनि तपाईंको मनपर्ने छनौट गर्न सक्ने क्षमता छ! यो समय तपाइँको मनपर्दो प्रतियोगी लाई अधिक संख्या को लाईक पाउन सहयोग गर्ने हो! यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब आफ्नो मत दिनुहोस्!
श्रीमती फेमिना अनलाइन शिकार, बॉश होम अप्लाइन्स द्वारा प्रस्तुत, कुनै सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्र होइन, तर बृद्धि र परिवर्तनको व्यक्तिगत यात्राको मान्यता हो। हाम्रो कपाल र मेक-अप पार्टनर नेचुरल्स, र हाम्रो रेशम आश्वासन साथी सिल्कमार्क हामीसँग रोचक, राम्रा व्यक्तित्व भएका महिलाहरूको खोजीमा सामेल हुन्छन्।
देश भर बाट धेरै दर्ताहरु छन्। तीमध्ये २० जनालाई तीन राउन्डमा अक्षरश: लड्नका लागि छनोट गरिएको थियो: अन्नीशा थाकर, अरुणिमा झा, अवनी पाण्डे, इप्सिता प्रियदर्शिनी, ईशनी जसवाल, महिमा बिष्ट, मुनमुन दत्त, प्राची मिहिर केन, प्रगति आचार्य, प्रेरणा निगम, राशी सिंघल, haचा शर्मा, रूपल शार्द बजाज, शिल्पी प्रियदर्शिनी, सोनल सोमानी, सुरभि मनोचा चौधरी, तपेश्वरी शर्मा, तरुणिका मट्टू, त्रिशा दास, यामिनी काang्ग।
एक राउन्ड: पहिलो राउन्ड एक फेशन राउन्ड थियो जहाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफैंलाई एक साडी सँगै राखिएको तीन लुकमा स्टाइल गर्न भनियो।
दोस्रो दुई: अर्को राउन्ड ब्यूटी राउन्ड थियो, जहाँ प्रतियोगीहरूले सँगै तीन सौंदर्य लुक राखे।
एक महिनामा लामो कपालको लागि घरेलु उपचार
तेस्रो चरण: प्रतियोगीहरूले 'प्लेटफार्ममा तपाईंको संस्कृति' चुनौती लिए र उनीहरूको पक्राउ परेका पाक परम्पराको प्रदर्शन गर्थे जुन पनी तर एक मोड़को साथ हो।
चौंडा राउन्ड: चौथो राउन्ड हो जहाँ प्रतियोगीहरू उनीहरूको कथा, विश्वास, शैली र व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गरेर 'आफैं' प्रदर्शन गर्छन्।
भ्रमण गर्नुहोस्: श्रीमती फेमिना अधिक डीटहरूको लागि।
बेली फ्याट कम गर्न उत्तम कसरत
प्राकृतिक तरिका कपाल झर्ने नियन्त्रण गर्न
कपाल झर्नेको लागि घरेलु उपचार
मध्यम कपालका लागि चरण कट
योगमा विभिन्न प्रकारका आसनहरू